Aaditaanka Meelaha Dhow - Seattle Traffic
Taageer ganacsatada gudaha, wax badan ka ogow xaafaddaada, kana faa’iideyso alaabaha gudaha adigoo sahan ku dhex maraya Jasiirad u egta West Seattle.
15-20 Minute Away: Raadso dukaamada, xarumaha caafimaadka, meelaha dhaqanka la aado, iskuullo, meelaha basasku istaagaan, iyo baraha lagu nasto ee u jira 15-20 daqiiqado halka aad deggan tahay.
Ka Cunteynta Xaafadda: West Seattle waxey leedahay qaar ka mida maqaayadaha iyo dukaamada qaxwo kuwa ugu fiican. Caawi xarumahaasi ganacsi ee gudaha ka jira adigoo kafee ka qaadanaya ama ka dalbanaya qado ama casho.
Isgoyska West Seattle: Bartamaha West Seattle, Isgoyska, waxad ka heleysaa dukaameysi, cunto, ama wax ka badan.
South Park oo Kaliya: Xaafadda South Park ee Seattle waxey soo bandhigeysaa maqaaayado, dukaamo qaxwo iyo foornooyin, dukaamada laga adeegto, adeegyo xirfadeysan iyo xarumo caafimaad. Raadso rugta ganacsi ee South Park oo caawi bulshada degmadaada.